zvitsva - Geofumadas
Innovations pamusoro peCAD software. Innovation mukugadzira 3d
Geofumadas yakavharwa mumunhu mazuva matatu e15th gvSIG Musangano Wepasi Pese muValencia. Pazuva rechipiri, zvikamu zvakapatsanurwa kuita zvina zvinyorwa zvine musoro sezuva rapfuura, kutanga ne gvSIG Desktop, pano zvese zvine chekuita nenhau uye kusanganiswa kwesystem zvakaburitswa. Vatauri vebato rekutanga, ...
Musangano wegumi nemashanu wepasi rose gvSIG wakatanga muna Mbudzi 15, ku Higher technical Chikoro cheGeodetic, Cartographic uye Topographic Injiniya - ETSIGCT. Kuvhurwa kwechiitiko ichi kwakaitwa nevakuru vePolytechnic University yeValencia, Generalitat Valenciana uye General Director weiyo gvSIG Alvaro Association ...